१ महिनामै तौल घटाउन चाहनुहुन्छ ? बिहान खाली पेटमा यसरी खानुहोस ज्वानो पानी | स्वास्थ्य जीवनशैली
July 1, 2021 NepstokLeaveaComment on १ महिनामै तौल घटाउन चाहनुहुन्छ ? बिहान खाली पेटमा यसरी खानुहोस ज्वानो पानी
काठमाडाैं । ज्वानोमा विभिन्न प्रकारका औषधिय गुणहरु पाइन्छन् । आयुर्वेदका अनुसार ज्वानोले मोटोपन घटाउन मद्दत गर्छ । ज्वानो खाँदा पाचनतन्त्र सक्रिय रहने भएकाले यसले कम्मर र पेटको बोसो कम हुन्छ ।ज्वानोको सेवनले शरीरका टोक्सिक पदार्थ बाहिर निस्किन्छ । र मेटाबोलिक पनि मजबुत बन्छ । यसले खाना पनि सजिल्यै पचाउन मद्दत गर्छ । ज्वानोको सेवनले शरीरमा सही तरिकाले पोषक तत्व शरीरले लिन्छ । यसका लागि अतिरिक्त क्यालोरी पनि खर्च हुन्छ । यसै कारण शरीरको तौल कम हुन थाल्छ ।
खाडीको घामले शुक्र’कीटमा ह्रास, खाडीबाट फर्कने २० प्रतिशत पुरुषहरुमा समस्या देखियो ।